Igbo, Romans, Lesson 013 -- The Wrath of God against the Nations is Revealed (Romans 1:18-32) | Waters of Life
Home -- Igbo -- Romans - 013 (The Wrath of God against the Nations)
1. Chineke ekpughere ọnya nke iwe megide mba nile (Ndi Rom 1:18-32)
NDI ROM 1:26-28
26 N'ihi nke a Chineke nyefere ha n'aka agụụ ihe ọjọọ. N'ihi na ọbụna ụmụ nwanyị ha gbanwere eji eme ihe maka ihe megidere okike. Otu aka ahụkwa, ụmụ nwoke hapụrụ nwanyi eji eme ihe, gbara ọkụ maka ibe ha, ndị nwoke na-eme ihe ihere, ma nata ntaramahụhụ nke njehie ha ruru. 28 Ma dika ha n’achọghi idobe Chineke n’ihe omuma ha, Chineke nyefere ha n’aka uche nzuzu, ime ihe ndị ahụ na-adabaghị;
Pọl dere ahịrị jọgburu onwe ya, “Chineke nyefere ha” ugboro atọ n'isi nke mbụ. Nkebi ahịrịokwu a na-egosi nkwụsị, iwe, yana ọkwa ikpe mbụ. Ahụhụ ga-adịrị ndị Chineke nyefere ike nke ihe ọjọ, n'ihi na ha adawo na nkwado na nchebe nke Onye Pụrụ Ime Ihe Niile.
Nkewapu site na Chineke na egosiputa onwe ya na agu ihe ojo nile nke ochicho obi. Ha na-agba ọsọ dị ka anụmanụ n’ọkụ, na-eche naanị imeju agụụ mmekọahụ ha. N’ebe ebe Mọ Nsọ adighi ebi n’ime obi, gharakwa ijikwa aru ya na ndi di ya n’iru, nwoke ghuru onye n’akwa ozo, oburu n’onye kpuchie ya isi na omume oma.
Karịsịa taa, na afọ nke ịha nhatanha n'etiti nwoke na nwanyị, ụfọdụ ụmụ nwanyị na-ekwu na ha nwere ikike imeju agụụ ha n’enweghị nwoke. Ọzọkwa, ụfọdụ òtù na-akwalite mmekorita nwoke na nwanyị iji kwụsị ịmụba ọtụtụ mmadụ. Agbanyeghi, Pol na-atụle ndị niile na-arara onwe ha nye agụụ ihe ọjọọ na-ezighi ezi, dịka enyere onwe ha na nghọgbu onwe ha n'okpuru ọnụma Chineke.
Ha niile nwere oke mmerụ ahụ n’ime onwe ha, yana ihe mgbagwoju anya n’uche ha. Ha abụghị ndị nkịtị, mana ha rọrọ nrọ ma mee ihe ha achọghị ime; n'ihi na onye ọ bula nke n sinmehie bu oru nmehie. Enwere kwa ọtụtụ njikọ aka, mmehie na njikọ aka, nke na-agbara ndị niile na-anaghị erubere iwu nke Chineke isi.
Ihe kpatara mbelata nke mmepeanya miri emi. Isi nke ihe ojoo abughi nmebi nke ndi mmadu, kama obu ihe ojoo, ndi n’achighi idebe Chineke n’uche ha. N'ihi na ha hụrụ onwe ha na ụwa n'anya karịa Chineke, ha dara site na adịghị ọcha ịkwa iko. Onye na-aguta ihe akaebe nke ndi mmadu ndi Kraist zoputara ga-amata na ndi a, tupu nzoputa ha, di anya n’ebe Chineke no. N'ihi ekweghi-ekwe, ndị a bụ ohu n'ime ụdị mmekọahụ na-adịghị ọcha na adịghị ọcha ọ bụla. Ma mgbe Kraist chọtara ha, o nyere ha mgbaghara, ọcha, mgbanwe, nkasi obi, ume, olile-anya na ọ .ụ.
Ot'odi, onye nke kpachapuru anya jupu n’ebe Chineke no, ma nogide neche ihe nke Mo Nso banyere nchegharị na mgbaputa, ga enwe obi uche. Onweghị ahịrịokwu ọ bụla a na-ekwu na mmadụ karịa ibu idebe okwu Chineke 'edecha'; n'ihi na n'ọnọdụ dị otú a, ọ gaghị alaghachikwute Chineke, n'ihi na nloghachi dị otú ahụ chọrọ ntụgharị. Okwu Grik 'nchegharị' pụtara ntụgharị nke uche. Chineke naele anya mgbanwe d nke nkiti ukwu na obi nke mmad na -agbanwe mmeghar of nke echiche na omume ndi gara aga, ka o wee nata ha ma mee ka ha dị ọhụrụ.
Ugbu a, gịnị banyere obi gị? Uche gi ghere oghe na Mo nke Chineke na nzoputa ya na idi ocha. Ọ bụrụ na ị ka na-ebi ndụ n'echeghị echiche, pụọ na Chineke, chigharịkwute ya oge ọ ka na-akpọ ya “Taa”. Rịọ Onyenwe gị ka o mee ka ihe nzuzo gị wee gbanwee obi gị. Ekwela ka ihe ị mere ghara ịdị ọcha. Onye nwe gi bu onye ogwu gi. Onye naanị ya nwere ike ịtọhapụ gị n'ihe niile ị na-eme ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọ hapụ mkpụrụ obi gị ka ọ hapụ gị. Gaghị echekwa onwe gị ma onwe gị. Ga - enwe mkpebi, juo, juo, ma nata nzọpụta nke Onye-nwe ị dị njikere ịchebe gị.
EKPERE: Gi Chineke di nso, I ma m, na ekpughere gi echiche m nile. Mara ihe m mere n’oge gara aga, ma onye ọ bụla m mehiere. Gbaghara m ihe na-agụ m agụụ, meekwa ka ihe na-agụ m dị ọcha. Dọta m n’okwu gị ka m wee hụ gị n’anya. Achọghị m ime mmehie ọzọ. Biko kee m n’ime mmụọ siri ike ka m nweta nnwere onwe gị n’aka gị. Zọpụta m n'obi m rụrụ arụ na ahụ rụrụ arụ. Are bụ dibịa m na onye nzọpụta m. Ọ bụ gị ka m tụkwasịrị obi.
Olee otú Pol si gosipu ta ihu nke iwe nke Chineke?
Page last modified on January 25, 2021, at 09:52 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)